बूढो बाओबाबको सियाँलमा
अफ्रिकी टापुबाट दुर्गा विनय
हिउँद लागेको छ ।
चम्किलो छ घाम तर रापिलो छैन । न्यानो छ ।
पहेंलिएका बाओबाबका पातहरु शाखाबाट छुट्टिएर हावामा तरेली खेल्दै भुईंमा आइ खस्छन् । एक याम जुनि बाँचेको उद्घोष गरेर ।
म बाओबाबका पातहरुसँग जीवनलाई दाँजी हेर्छु । अर्को याम जीवन सकुशल बाँचेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वास्थ्यलाई/प्रकृतिलाई । कुनै अलौकिक चिजलाई । निलो आकाशलाई । यसरी नै यो एक याममा कत्ति आफन्तहरु/मित्रहरु पहेंलिएर शाखाबाट छुट्टिए । फेरि नजोडिने गरि ।
बाओबाबको सियाँलमा जीवन शान्त छ यहाँ ।
शहरको/दुनियाँको कोलाहलबाट टाढा छ । विस्तारै– कसैको हतारोमा नपरेर आफ्नै धुनमा हिँडिरहेको छ । यहाँ बिहानै चराहरुको चिर्रविर्र सुन्न पाइन्छ । दिनभरी स्वच्छ हावा फोक्सोभरि लिन पाइन्छ । दिनभरी हिँड्दा पनि यहाँ आँखा बिझाउँदैन ।
टोङ्गोगारामा छु ।
बाओबाबको सियाँलमा छु ।
टोङ्गोगारा बाओबाबको सियाँलमा छ ।
यहाँ आएको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । “तीन महिनामा घर जान पाउँछु ।” खुशी हुन्छु । स्कूलमा बर्खे बिदामा हुने खुशी अझै पनि ममा जीवितै छ । अझ खुशी छु– यहाँ गृहकार्य गर्नु पर्दैन । तर घर पुगेपछि गृहस्थ जीवनको व्यस्तता गृहकार्यभन्दा ठूलो हुनेछ ।
– “यस ठाउँलाई कसले टोङ्गोगारा नाम दियो ? किन दियो ?” आर्थरलाई एकदिन यसै सोधेको थिएँ ।
– “हाम्रो नेताहरुले दिएको हुनुपर्छ ।”
नाममा के छ र । यस ठाउँलाई जे नाम दिएपनि हुन्थ्यो । कसैले कुनै बिहान उठेर – त्यस निर्जिव मानवहिन ठाउँलाई टोङ्गोगारा भनिदिउँ भन्ने सनकले न्वारन गरिदिएको पनि हुनसक्छ ।
– “के हो त टोङ्गोगारा भनेको ?” हाम्रो एक स्वतन्त्रता सेनानीको नाम हो, जोसिया टोङ्गोगाा । उसैको नाममा यस ठाउँको नामाकरण गरियो ।”
– “त्यसअघि यस ठाउँको नाम के थियो त ?”
– “बिफोर दिस प्लेस वाज जस्ट अ बुस ।”
– “नाम दिन किन आवश्यक ठानियो ?” सोधिन । सोध्न आवश्यक पनि ठानिन । ऊ पनि सायद उत्तर दिन आवश्यक ठान्दैन थियो होला ।
टोङ्गोगारा आफैंमा सानो संसार हो । बाह्र हजार जनसंख्या भएको सानो संसार ।
– दशकौंदेखि युद्धले जीर्ण बनेको देशबाट भागेर आएका कङ्गोलिजहरु छन् ।
– जान्जावितको हिंसा सहन नसकेर भागेर आएका सुडानीजहरु छन् ।
– अल–शबाबको आतंकबाट उम्केर आएका सोमालिहरु छन् ।
– इथियोपियन, बुरुण्डीयन, रुवाण्डनहरु छन् ।
शरणार्थी शिविरमा विभिन्न सेन्टहरुका चर्चहरु छन् । इसाई धर्म भित्रकै विभिन्न उपशाखाका चर्चहरु शिविरभरि व्याप्त छन् । पेन्टेकोष्टल, प्रोटेष्टान्ट रिफर्मण्ड, जाहोभा विटनेस । अनि विचार्छु– हाम्रो देश (नेपाल) मा इसाई धर्म लिनेहरु कुन उपशाखामा विभक्त हुँदा हुन् । तर फेरि विचार्छु– विदेशी हिन्दु हुँदा हुन, ब्राह्मण हुँदा हुन अथवा सुद्र । थुप्रै मस्जिद पनि छन् शिविरभरि । सुडानीहरुको आफ्नै , सोमालिहरुको आफ्नै ।
समुद्री आँधी इडाईको चार दिनको प्रकोपमा पनि बाओबाबहरु सिधा अजङ्ग उभिए । त्यसपछि पनि अजङ्ग उभिएका छन् । लाग्छ यस रुखलाई ढाल्न ठूलै प्रकोप आउनुपर्छ पृथ्वीमा ।
तर, कमसल माटोले बनेको ईंटामा सुरक्षाको आभाष गरेर बसेका शरणार्थीहरुको विश्वासको पर्खाल शिविरभरि ढल्यो । बाटो जति सबै खोलामा परिणत भयो ।
दुःखीलाई त दैवले पनि हेप्दो रहेछ ।
असहाय पिताको आँखामा ‘विश्वासको टेवा’ याचना गरिरहे साना नानीहरुले । टोङ्गोगारामै हामी ‘आँधी नआउने घर’ मा रातभरी हुरी चलेको प्रसङ्ग गरेर बस्यौं ।
मुतारेबाट झण्डै दुई सय किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा झाडीहरुको बीचमा लुकेर बसेको छ यो सानो संसार । प्राइभेट गेम पार्कसँग सिमा साँटेर ।
अनि फेरि विचार्छु “भाग्यले हेपेकाहरुलाई किन यस्तो डरलाग्दो ठाउँमा राख्छन् सरकारहरु ?”
तर, हामीले नै पनि भूटानी शरणार्थीहरुलाई कहाँ राख्यौं– टिमाईको बगरमा, बेलडाँगीको जङ्गलमा, पथरीको जङ्गलमा । बर्खामा रुखले किचिएर मर्थे । टिमाईमा आउने भेलबाढीले कत्तिलाई बगाएर लग्यो होला । हात्तीको बसाईं–सराईमा हात्तीकै आक्रमणले कति मरे होलान् ।
सरकार ! तिनीहरुलाई पनि शहीद घोषणा गरिदेउ । तिम्रो निर्णयका शहीदरु हुन ति ।
एक साँझ चौकिदारसँग गफिँदा उसैले भन्यो– “आजकल सिंह गर्जेको सुनिँदैन । सायद वरपर छैनन् होला ।”
“सिंह !” म सशंकित भएको थिएँ ।
“हो नि । बिहान दुई–तीन बजेतिर सिकार गर्न निस्किन्छन् । अस्ति–अस्ति गर्जेको सुनिन्थ्यो । आजकल सुनिएको छैन ।”
“हो र ?” अँध्यारो थियो । तर मेरो अनुहारमा डर पूरै देखिएको हुनुपर्छ ।
“एक–डेढ हप्ता अघि ऊ त्यै बाओबाबको फेदमा एउटा गाई मारे । दुई–तीनवटा सिंह हुनुपर्छ । आधि आएर गएछन् ।”
“यहाँ सिंह, हरिण, गोही सबै जनावर छन् सर । अस्ति मात्रै क्याम्पबाट गोहीले सुङ्गुरको पाठो लगेछ । मान्छेको पाठो लगेको भए कथै अर्को हुन्थ्यो ।” हामी हाँस्यौं । सुङ्गुर्नी हामी हाँसेको देखेर छक्क परि होली !
बाओबाब शान्त उभिन्छ । अरु रुखहरु झैं ऊ सानो–तिनो हावाहुरीले हल्लिँदैन । आत्तिँदैन । सानो बतासमा ठूलो आवाज गरेर सुसेल्दैन । इडाईमा त उसले कुनै आवाज गरेन भने कहिले गर्छ होला ।
“तिमी कहिले विचलित हुन्छौ, बाओबाब ?”
“मैले विचलित हुन छाडीसकें । त्यो मेरो डिएनएबाटै हटीसक्यो ।” ऊ फेरि मूर्तिवत हुन्छ ।
नआत्तिनु त बाओबाब जस्तो ।
टुँडिखेल अतिक्रमण हुँदा आत्तिने हामी ।
प्रधानमन्त्री निवास विक्री हुँदा आत्तिने हामी ।
बाइडबडी प्रकरण, सुडान घोटाला, तेत्तीस किलो सुन काण्डमा छिट्टै उत्तेजित हुने हामीलाई बाओबाब हुन अझै धेरै समय लाग्ला ।
दुःखमा आत्तिहाल्ने, अलिकति सुखमा खुशी भइहाल्ने म एउटा सानो झाडी रहेछु– युगौं लाग्ला मलाई बाओबाब बन्न !
२०७६ असार १५ आइतबार १५:३३:०० मा प्रकाशित